"Lift Away Cancer" ရင်သားကင်ဆာကိုသိရှိထားသည့်အားကစားရုံများယခုရရှိနိုင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အဝတ်အစား » ရရှိနိုင် "ကင်ဆာ Away ချီ" ရင်သားကင်ဆာပွား Gymwear Now ကို
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်သစ်ရင်သားကင်ဆာပွားကြေညာဖို့ Proud ဖြစ်ပါတယ် Gymwear
အခုတော့ရရှိနိုင်ကင်ဆာရင်သားကင်ဆာပွားကို T-ရှပ်အင်္ကျီဝတ် Away ရုတ်သိမ်းပေးရန်
ဤ Brand အသစ်တီရှပ်များကို eBay တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်လေလံဆွဲခြင်း (သို့) ၀ ယ်ယူခြင်းအားချက်ချင်း ၀ ယ်ရန်ရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ကင်ဆာတီရှပ်လေလံတစ်ခုစီ၏ ၁၀% ကို Susan G Komen Foundation မှ eBay Giving Works မှလှူဒါန်းမည်။
eBay Giving Works သည် eBay တွင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းရင်းများကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။ eBay သည်ငွေရှာဖွေရန်အတွက်သန်း ၁၀၀ ကျော် eBay ရပ်ရွာမှအသင်းဝင်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောသူများကိုကူညီသည်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ eBay ကိုအလုပ်လုပ်ပေးခြင်း
Susan G. အ Komen အကြောင်း:
လူတွေကိုအားပေးအားလုံးအတှကျရညျအသှေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိစေရန်နှင့်ကုသရှာတွေ့မှသိပ္ပံ energizing အားဖြင့်အစဉ်အမြဲဘဝတွေကိုနှင့်အဆုံးရင်သားကင်ဆာကယ်ဖို့။ Susan G. အ Komen, ရင်သားကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက http://www.komen.org
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွ Away ထုတ်စစ်ဆေးကင်ဆာကို eBay လေလံ!
အဆိုပါလီမိတက် Edition ကို Komen 3190 နယူး Balance ကို run ဖိနပ်နှင့်အတူရောဂါကုထုံးများအတွက် Up ကိုဇာ!
25 နှစ်များအတွက်ခိုင်ခံ့အလုပ်လုပ်ခြင်း: ဆိုင်လီမိတက် Edition ကို Komen 3190 Newbalance.com မှာ
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုရရှိနိုင် "ကင်ဆာ Away ချီ" ရင်သားကင်ဆာပွား Gymwear Now ကို"
Pingback: နယူးရင်သားကင်ဆာဆေးဝါး '' ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရလဒ်များ '' နှင့်အတူလူနာများထဲတွင်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များပေါ်ပေါက် | HNO
Pingback: စက်တင်ဘာလ 2014 Giveaway: 10 / 15 / 14 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိတဲ့အကြီးစားကို T-Shirt / Drawstring Bag အနိုင်ရမည်ဟု - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
Pingback: ရင်သားကင်ဆာပွားကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အထည်နှင့်အတူကင်ဆာ Away ရုတ်သိမ်းပေးရန်